EGWUREGWU EGWUREGWU MAKA XBOX LIVE GOLD NDỊ DEBANYERE AHA NA NOVEMBER 2018 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Nlere anya nke November 2018: egwuregwu efu maka ndị na-edebanye aha Xbox Live Gold
Ndenye aha Xbox Live Gold akwụ ụgwọ nwere ụgwọ zuru ezu nke na-adọrọ mmasị maka ndị gamers. Ma, ma eleghị anya, ihe kachasị mma n'ime ha bụ usoro egwuregwu nke ọnwa dị ka onyinye, nke ị nwere ike ịchekwa ego dị mma. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnwa a, ndị nwere mmasị na Xbox Live Gold na free egwuregwu na November 2018 ga-azọpụta 4246 rubles.
Egwuregwu maka egwuregwu Xbox Live Gold ka a tọhapụrụ na November
Na November, ndị nwe "ndebanye" ọlaedo ga-enwe obi ụtọ na egwuregwu anọ, nke ọ bụla kwesiri nlebara anya na oge eji n'ihu egwuregwu. The kit na-agụnye onye na-agba agba, egwuregwu arcade, slasher na ihe omume.
Onye na-eme ihe nkiri na-ewere ọnọdụ na agha nke Agha Ụwa Mbụ. Onye ọkpụkpọ ahụ na-aghọ otu n'ime agha kachasị njọ nke oge - arụmọrụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. N'ihi ya, a na-eburu agha ndị dị n'ọzara Arabia na agha maka Alps dị elu nke ezi akụkọ ihe mere eme na egwuregwu ahụ.
N'okwu, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịhọrọ onye onye agha ga - alụ ọgụ ma kwuo ndị agha ka ha chịkwaa. N'otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị agha na-edo onwe ha n'okpuru onye na-agba chaa chaa na-adọrọ mmasị. Na agha ahụ, i nwere ike iduga ndị agha ịnyịnya, tankị, ụgbọala ndị agha na-agba ụgbọelu. Tụkwasị na nke ahụ, n'ọgba aghara nke ndị egwuregwu, e nwere ngwá agha.
Ị nwere ike igwu egwu naanị, ma ọ bụ ị nwere ike isonyere ndị ọrụ netwọk nke mmadụ 8 ruo 64. Otu n'ime ihe kachasị mkpa nke egwuregwu ahụ - àgwà nke ndịna-eserese, nke kwekọrọ na foto nke ndị na-arụ ọrụ na Hollywood. Tụkwasị na nke a, a na-ewere Agha 1 dịka ihe ịga nke ọma na mmepe nke akụkọ egwuregwu nke agha ụwa nke mmalite narị afọ nke iri abụọ.
Na nsụgharị akwụ ụgwọ, ego egwuregwu ahụ bụ 2499 rubles. Ị nwere ike nweta ya n'efu site ndenye aha Xbox Live Gold ruo na November 30.
Ihe egwuregwu dị egwu nke dị mfe ịchọrọ ijikwa ụgbọ elu nke ngwaọrụ ahụ, nke ike anyanwụ dị. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na n'abali a agaghị enwe ebe iji nweta ụgwọ ọrụ dị mkpa. O di nkpa iche echiche banyere ọdịnihu - gbanwee ike gi na ike gi n'ehihie.
Ihe oru ngo a bu ihe di iche iche site n'echebara anya nke oma, nke, ma nke a, nwere onwe ya. Ọrụ nke onye ọkpụkpọ ahụ bụ ịbịaru nso na Sun, iji gabiga ókè nke ohere dịnụ na ọbụna ọdịiche gị.
Ndị na-emepụta egwuregwu ahụ site na Flippfly studio jisiri ike na-ejikọta ha na-arụ ọrụ ha na-agba ọsọ ma na-agba ọsọ n'ememe ha.
Egwuregwu ahụ nwere ọtụtụ nnọkọ, na nke ọ bụla ọ dị mkpa igosi oke kachasị ike. Ọnụahịa nkịtị nke egwuregwu ahụ bụ 499 rubles. Nwere free bụ dị ka ndị debanyere aha site na November 16 ruo December 15.
Isi ihe a na-eme ihe nkiri egwuregwu a bụ Altair. Ọbụna mgbe ọ bụ nwata, a kwenyere ya na òtù ndị omekome ahụ, bụ ebe ọ na-enweta ọzụzụ nke ọma, nke mere ka ọ bụrụ onye na-enweghị atụ. Ugbu a, ọrụ ya bụ ịkwado ụzọ nke ndị na-abịa si Europe ma kwụsị Ntugharị nke atọ, bụ nke dị na 1191 gbanwebere maka mba ndị dị n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Egwuregwu egwuregwu na-enye gị ohere ịkwaga gburugburu obodo na obodo dị iche iche, lee ahịa ahịa mpaghara, na-ekwurịta okwu na ndị obodo - ndị si n'ọdịbendị na mba dị iche iche. Na egwuregwu a na-enye gị ohere inweta ekpomeekpo agbụrụ - site na mkparịta ụka na ndị ahịa ahịa na ndị nchụàjà, ihe omimi nke ụlọ okpukpe.
Ị nwere ike ịzụta egwuregwu ahụ maka 497 rubles, yana dịka akụkụ nke ndebanye aha n'efu - ibudata site na 1 ruo 15 November.
Nke a bụ slasher, nke nwere ihe dị iche iche n'egwuregwu egwu ma na-ezo aka na onye ọkpụkpọ na ndị ọkachamara ụwa - Dante Alighieri's Comedy Comedy. N'eziokwu, nkọwa nke ọrụ ahụ n'egwuregwu ahụ wee bụrụ ihe karịrị n'efu.
N'ihi ịhụnanya ya, onye bụ isi - onye agha na onye agha nke crusades ndị aha ya bụ Dante ga-aga n'akụkụ niile nke hel. Akụkọ a malitere n'eziokwu ahụ bụ na mkpụrụ obi nke onye agha a hụrụ n'anya - Batrice Beatrice - batara n'ala Lucifer, ọ ghaghị ịchọta ya ma wepụta ya ngwa ngwa o kwere omume. Ihe ngbochi na uzo siri ike bu nmehie nke Dante, ugha ya na anu ndi siri na nkpuru obi puta.
Iji merie onye iro ahụ, dike ahụ nwere ike iji ngwá agha, nke ọrụ ya bụ Crucifixion Nsọ na Ọnwụ Ọnwụ. Tụkwasị na nke ahụ, n'ịlụso ndị mmụọ ọjọọ ọgụ ga-akwado ihe ngwọta nke mgbagwoju anya nke a na-ahụkarị na ụzọ onye ọkpụkpọ.
Ọnụahịa nkịtị nke egwuregwu ahụ bụ 749 rubles. Enweta ohere nbudata n'efu ga - emeghe site na 16 ruo 30 November.
N'agbanyeghị oyi mbụ nke mpụga windo, November maka ndị Xbox Live Gold ga-ekpo ọkụ. Egwuregwu nke egwuregwu n'efu wee ghọọ ọgụ ihu na ihu maka ndị na-enweghị ike ichere iji chekwaa ụwa - guzoro n'ụzọ Agha Ntụte, rịgoo n'ime ogige nke Agha Ụwa Mbụ, ọbụnadị, na Kosoy, na-agbadata n'ọgba ọchịchịrị Setan.